typography Montserrat: waxa uu yahay, adeegsi iyo sifada guud ee qoraalka | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waxa jira xarfo naga caawiya fahamka nashqadaynta waxa uu yahay ama kala saari doona sida uu noqon doono. Waxa jira kuwo kale oo innagaga tagaya wax aan la garanayn, waana farriinta ka dambaysa tan inoo sheegaysa sida ay noqon doonto. Wajiyada wax lagu qoro ayaa la nashqadeeyay iyadoo ujeedadu tahay in Dhammaan su'aalahan waxay ka jawaabi karaan naftooda iyaga oo aan u baahnayn ereyo.
Waana sababtaas awgeed waxay qayb ka ahaayeen naqshadeynta muddo tobanaan sano ah. Wax yar baa og waa taariikhda qaarkood. Markan, waxaan u nimid inaan kaala hadalno qoraal aad u gaar ah oo matale, Qoraalka Montserrat Waxaan rabnaa inaad dukumeenti ka dhiibto sababtoo ah waa mid ka mid ah xarfaha si fiican ugu habboon waxaad raadineyso.
Sababtan awgeed, waxaanu kuu sharxi doonaa waxa uu yahay qoraalkan muhiimka ah iyo sababta uu u yahay. Sii wad akhrinta ilaa dhamaadka sababtoo ah way u qalmi doontaa.
1 Typography Montserrat: waa maxay
1.2 Isticmaalka joogtada ah
2 Halka laga soo dejiyo font Montserrat
2.1 Google Faraha
3 Noocyada kale ee la midka ah ee xiisaha
Typography Montserrat: waa maxay
Si aan u bilowno oo aan u awoodno in aan u fahanno waxa uu yahay qoraalkan, waa in aan ku laabanaa dhinacyo fudud. Sidaa darteed, waxa aanu ku qeexnay qoraalkan sida Farta waxaa abuuray Julieta Ulanovsky 2010.
Sida hadalkaagu tilmaamayo. Waxaa dhiirigeliyay wax aan ka yarayn xaafadda yar ee Montserrat, marka lagu daro, waxay sidoo kale leedahay dabeecad gaar ah oo lagu dhejiyo qoraallada 20-meeyadii.
Maaha wax la yaab leh in ay tahay mid ka mid ah noocyada ugu badan ee matalayaasha ah, maadaama ay had iyo jeer la socotay calaamado badan iyo mashaariic badan oo naqshadeynta garaafyada ah. Taasi waa sababta aynaan sidoo kale u awoodin in ay seegaan qaar ka mid ah sifooyinka guud ee hadda sii nooleynaya oo sharaxaya sababta weli loo isticmaalo sida walxaha ugu muhiimsan marar badan.
Xitaa waxaad la yaabi doontaa inaad ogaato sida ay u egyihiin jir ahaan iyo waxa ugu muhiimsan ee ay isticmaaleen.
Hadda, haddii aan go'aansanno inaan soo dejinno nooca noocaan ah waxaan arki karnaa inuu leeyahay noocyo kala duwan oo naqshadihiisa ah. Nooca caadiga ah (caadiga ah) ee font-kan waxa iibsatay shirkadda Google Fonts oo aanu isla markaaba ku soo dejisan karno bilaash. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay noocyo u dhigma, taas oo ka dhigaysa mid aad u xiiso badan in la arko: nooca geesinimada leh, nooca beddelka ah iyo farta ku dheggan ama nooca hoosta laga xarriiqay. Shaki la'aan, waa qodob la jecel yahay in la helo far-qore leh noocyo labaad tan iyo inta badan, haddii aan u isticmaalno cinwaannada, waxaan ku ciyaari karnaa dhumucda iyo u janjeersiga farta.
Muddo tobanaan sano ah, nooca Montserrat looma dooran inuu noqdo matale u ah calaamadaha ama sumadaha, laakiin si kastaba ha ahaatee, magacyo badan ayaa u isticmaali jiray xayaysiis ahaan boodhadhkooda ama meelaha xayaysiinta. Taasi waa sababta aan uga heli karno waraaqo badan, shabakado ama meelo u baahan dhinacyo badan oo garaafyo ah. Sababtoo ah kala duwanaanshaheeda sharciyaynta sare, waxay sidoo kale degtaa codsiyo badan oo inta badan la isticmaalo, taas oo ka dhigaysa qoraal ku habboon shabakadaha iyo warbaahinta jirka labadaba. Shaki la'aan, waxba kama tago in la doonayo.
Halka laga soo dejiyo font Montserrat
Google Fonts waa mid ka mid ah aaladaha inta badan ay adeegsadaan isticmaaleyaasha intarneedka. Waa degel ku habboon soo dejinta farta kala duwan. Dhammaantood waxaa lagu gartaa inay xor u yihiin isticmaalka waana far ay ku jiraan wax badan oo sharci ah. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qayb ballaaran oo xarfo ah iyo makiinad raadin oo loogu talagalay in lagu helo qaar ka mid ah xarfaha ugu fiican ee matalaya naqshadda garaafka hadda. Shaki kuma jiro, waa ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu bilaabi karo adduunka naqshadeynta.
Haddii aan ka fikirno degel halkaas oo aan ku soo dejisan karno xarfaha bilaashka ah oo leh in ka badan toddoba milyan oo noocyo kala duwan ah, waxay shaki la'aan noqon doontaa Dafont. Qalabkan, Mar dambe ma haysatid marmarsiiyo aad ku soo dejisan karto qaar ka mid ah xarfaha ugu fiican. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay mashiinka raadinta oo aad u ballaaran, kaas oo kuu sahlaya inaad hesho far ku habboon astaantaada shaqada. Wakhti ha lumin oo bilow isticmaalka qalabkan aadka u sarreeya, sababtoo ah kama qoomamayn doontid, waxaadna shaqadaada siin doontaa taabasho shakhsiyeed iyo hal abuur badan.
Font River waa qalab u shaqeeya sidii mashiinka raadinta farta. Waxa kale oo ay leedahay suurtogalnimada in si degdeg ah oo bilaash ah loo soo dejiyo. Waxa lagu gartaa in ay ka kooban tahay qayb il ballaadhan. Waxaan heli karnaa xarfo leh nashqad aad u badan oo Gothic ah, kuwo kale oo leh nashqad tignoolajiyada badan, kuwa kale oo aad u fara badan oo far gacanta lagu qoray isku ekaysiinaya. Waxaan sidoo kale helnaa xarfo roman iyo sans serif sans serif ah. Marka la soo koobo, ma seegi kartid qalabkan oo ay ka buuxaan xarfo noocyo kala duwan leh. Sidoo kale, la yaab maaha in qoraalkaaga ku habboon laga heli karo kumanaanka tab ee uu leeyahay.
Xulashadayada ugu dambeysa oo aan ugu yareyn meesha aad ku soo dejisan karto xarfaha lacag la'aan waa Font Freak. Beddel kale oo bilaash ah oo leh wadar ahaan in ka badan 8 kun oo far si loo soo dejiyo halkaasoo ku dhawaad ​​​​400 naqshadeeyayaasha garaafyada ay ku lug leeyihiin.
Waxa laga yaabaa in aan ku qancin ama aan ku qancin dadka isticmaala kuwaas oo mar hore isku dayay, waa taas Ma bedeli karno midabka laakiin kaliya cabbirka. Waa dhinac taban, maadaama midabku yahay shay muhiim u ah xarfaha.
Noocyada kale ee la midka ah ee xiisaha
Shaki la'aan, haddii aan dooranno wejiga xiddig kale, wuxuu noqon lahaa nooca Helvetica. Waxa lagu tiriyaa wejiga ugu isticmaalka badan adduunka. La yaabna maaha, sababtoo ah muuqaalkeedu wuxuu ka dhigayaa mid si fiican loo naqshadeeyey.
Waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan. Waxaa la sameeyay 1957-kii waxaa sameeyay naqshadeeye garaaf Max Miedinger iyo Edouard Hoffmann. shirkad gaar ah oo u heellan naqshadaynta wejiyada. Farta noocaan ahi waxa ay noqotay fartii hore ee 60aadkii iyo 70aadkii, waxaana mahaddii fannaanka casriga ah ee uu lahaa ku mahad naqaysaa, waxa ay noqotay farta ay maanta taagan tahay.
Futura waa mid kale oo ka mid ah xarfaha gala 5-ta sare ee xarfaha ugu isticmaalka badan. Naqshadeeyay naqshadeeye garaafiga Paul Renner 1925, Waa nooc sans-serif ah oo uu saameeyay isbeddelka faneed ee Bauhaus. Waxaa ka mid ah sifooyinkeeda guud, waxay u taagan tahay inay ilaaliso muuqaal joomatari oo caddaalad ah qaababkeeda, marka lagu daro waxay sidoo kale leedahay noocyo kale oo lafteeda ah kuwaas oo u dhexeeya xariiqyo khafiif ah ilaa kuwa dhumuc weyn iyo calaamado badan oo calaamadeysan: geesinimo, geesinimo, geesinimo sare leh, iwm. Waa hab ku habboon in lagu socodsiiyo qoraalka iyo qoraalka weyn, taas oo ka dhigaysa far aad u shaqaynaysa.
Nooca Garamond waa far uu nashqadeeyay nooca naqshadeeyaha, Claude Garamaond, oo sidoo kale loo yaqaan daabace iyo xardhaye. Aad bay muhiim u ahayd wakhtigaas in mashaariceeda ay bilaabeen inay yeeshaan qaar khuseeya. Sidaa darteed, wakhti cayiman oo xirfadiisa ah, Boqor Francis I ee Faransiiska ayaa u wakiishay inuu naqshadeeyo qoraal-gacmeed kaas oo yeelan doona taxane ah oo Giriig ah oo wakhtigaas ah.
Hadda, waxaa jira noocyo badan oo farcan ah, laakiin inta ugu badan ee la isticmaalo waa Adobe Garamond typeface, oo uu naqshadeeyay Robert Slimbach oo aan ka heli karno agabka sida Adobe Fonts.
Bodoni waa xiddigta farta Talyaaniga ee waagaas. Waxay ku dhalatay magaca naqshadeeye Giambattista Bodoni. Waxa aan curiyey far-fareedkan oo maanta caan noqday, dhammaadkii qarnigii XNUMX-aad, waxana uu ahaa gebogebadii horumarkii ballaadhnaa ee ku-meel-gaadhka ahaa ee qoraalka Roomaanku. Waa qoraal-gacmeed lagu garto inay ka kooban yihiin farqi fiican oo dhumuc weyn leh oo qaababkeeda ah. Intaa waxaa dheer, waxa ay sidoo kale ka kooban tahay qaar ka mid ah xaraashka dhuuban oo iyaga si aad ah u tilmaamaya. Waxaa jira noocyo badan oo la cusboonaysiiyay, sida mid uu sameeyay Bauer Bodoni oo loogu talagalay 1926 aasaas gaar ah.
Suurtagal maaha in la arko qoraalkan oo ka muuqda boodhadh badan, calaamado, ama goobo xayaysiis. Abuuraha laftiisa waxaa lagu gartaa inuu yahay qoraaga xarfo iyo naqshado kale oo badan, taas oo ka dhigaysa fartan loo arko inay tahay far muhiim u ah adduunka naqshadeynta. Iyaga oo ay weheliyaan lataliyihii iyo aabihii, waxay abuureen ilaa 190 xarfo oo dheeraad ah kuwaas oo loo qaybiyay qaybo kala duwan oo qoraal ah.
Franklin Gothic waxaa loo qaabeeyey 1904tii wuxuuna hadda bixiyaa noocyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah kuwaas oo sifo badan u leh, laga bilaabo dhumucdiisuna waxay ku habboon tahay cinwaannada waaweyn, dhumucda ganaaxa ama joogtada ah ee qoraallada iyo cutubyada waaweyn.
Waxaan rajeyneynaa inaad wax badan ka baratay far-qoraalkan oo noqday mid caan ah oo wakiil ka ah qaybta naqshadeynta garaafyada. Sida aad awood u yeelatay inaad hubiso, far badan oo aan soo sheegnay waxaa laga sameeyay il-abuur: meel, qof, shay muhiim u ah taariikhda adduunka ama aadanaha, iwm.
Qoraal kasta ama far kasta oo aan helno waxaa loo qaabeeyey ujeeddo bilow ah. Hadda waa wakhtigaaga si aad u sii waddo raadintaada xarfaha oo aad diiwaan geliso naftaada xitaa wax badan oo iyaga ku saabsan. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa qaar ka mid ah qalabka aan soo jeedinnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Qoraalka Montserrat